Ny governemanta ao Filipina dia manolotra serivisy tsara indrindra ho an'ireo olona mahomby amin'ny aretina voajanahary na olana hafa. Manolotra ny Karatra Dabawenyo, izay ahafahan'izy ireo manana vola kely ahazoana manampy azy ireo manokana. Mba hampiharana an'ity karatra ity dia manome ny Dabawenyo App izy ireo.
Izy io dia ny rindranasa Android, izay ahafahan'ny olona voakasik'izany mangataka amin'ny tetikady isan-karazany. Hanolotra valiny haingana aorian'ny fampahalalana marina narotsaka. Fampiharana tsotra izy io, izay manome serivisy tsara indrindra ho an'ny vahoaka.
Araka ny fantatrao dia maro ny olona traboina noho ny Covid-19 ary misy ny toe-javatra mikorontana noho ny fiatoana eo noho eo. Ny governemanta samihafa dia manome fomba samihafa hanampiana ny olom-pireneny. Ka ny governemanta Filipina dia manolotra an'ity vahaolana ity, izay azon'ny olona sahirana mangataka.
Misy serivisy samihafa misy vokatra hafa. Noho izany, azonao atao ny mangataka an'izay amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Hizara azy rehetra aminao eto amin'ity pejy ity izahay. Raha te hiditra amin'ity app ity ianao dia tokony handalo ity alohan'ny hampiasana azy. Tokony hahafantatra kely momba izany ianao.
Topimaso momba ny App Dabawenyo
Izy io dia rindranasa Android maimaimpoana, izay novolavolain'ny Governemanta eo an-toerana ao Davao. Manolotra ny vahoaka izy mba hangataka fanampiana isan-karazany amin'ny governemanta. Mila an'ity rindranasa ity fotsiny izy ireo hangataka fanampiana.
Misy fepetra sasany amin'ny fanampiana samihafa, izay ho azonao avy amin'ny governemanta. Hizara an-tsipiriany azy ireo aminareo rehetra izahay. Ireo olona manana ireo filàna ireo ihany no afaka mangataka fanampiana. Misy bebe kokoa, izay hanampy amin'ny ho avy, saingy fantaro fa misy ireo.
Araka ny efa fantatrao fa i Davao dia iharan'ny loza voajanahary im-betsaka. Matetika ny horohoron-tany any Filipina ary i Davao koa dia tratran'ny Flashflood sy ny fihotsahan'ny tany, noho izany dia afaka mangataka fanampiana ara-bola ireo olona iharan'ny loza voajanahary rehetra.
Araka ny fantatrao dia tsy misy afaka maminavina ny ho avy, na inona na inona mety hitranga ao anatin'ny segondra iray. Noho izany, raha misy zava-dratsy mitranga ary mila vola amin'ny vonjy taitra ianao dia afaka mangataka vola eo noho eo ihany koa. Hahazo vola vonjy maika amin'izany ianao Mahazo App.
Raha mihoatra ny 60 taona ianao, dia azonao atao koa ny mangataka tombontsoa ho an'ny zokiolona. Manolotra tombony be dia be ho an'ireo zokiolona. Ny taona farafahakeliny dia tokony ho 60 ary tsy misy olona ambanin'ity taona ity afaka mangataka izany.
Amin'ny ho avy dia manampy sokajy hafa koa izy io, izay ahafahan'ny olona sahirana hafa mahazo tombony. Saingy tsy maintsy miandry ny fanavaozana manaraka ianao. Raha manana olana ianao, dia manolotra serivisy fikarakarana mpanjifa namboarina, izay ahafahanao mifandray amin'ireo tompon'andraikitra.
Anaran'ny fonosana com.dabawenyo.app
Endri-javatra manan-danja amin'ny Dabawenyo App
Rehefa nanandrana namaky ny momba an'ity rindranasa ity izahay, saingy misy ny mety tsy hahitana teboka sasantsasany, izay azonao zaraina aminay koa amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Hizara ny lisitry ny fiasa lehibe eto ambany izahay.
Fanampiana ara-bola ireo olona tratry ny loza voajanahary.
Manome vola avy hatrany raha misy vonjy maika
Geotagging amin'ny fotoana tena izy an'ny mpampiasa tsirairay
Ahoana ny fampidinana ny Dabawenyo Apk?
Azo alaina ao amin'ny tranonkala ofisialy izy io. Raha te hampidina azy avy amin'ity pejy ity ianao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ao anatin'ny segondra vitsy ny fisintomana.
Rehefa vita ny fisintomana dia aza hadino ny mamela ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny Security Setting alohan'ny fizotry ny fametrahana.
Ny App Dabawenyo no fomba tsara indrindra hanamorana ny olona mitovy ary iray amin'ireo dingana tsara indrindra ataon'ny governemanta izany. Tokony hanohana hatrany ireo tompon’andraikitra amin’ny fanovana tahaka izao hanamorana ny vahoaka.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Dabawenyo Apk, App Dabawenyo, Mahazo App Post Fikarohana
911 Operator Apk Download Ho an'ny Android 